Saraakiil katirsanaa Al-Shabaab oo gacanta lagu dhigay [Magacyadooda]
AWDHEEGLE, Soomaaliya - Labo Sarkaal oo kamid ahaa Al Shabaab ayaa lagu qabtey gobolka Shabeellaha Hoose, ee Koonfurta dalka Soomaaliya.
Ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigay Cabdikariim Abu Hamza, oo ahaa madaxa maaliyadda Al-Shabaab ee gobollada Shabeellaha Hoose & Banadir iyo Sheekh Muudey oo katirsanaa Saraakiisha garabka Sirdoonka Al Shabaab ee loo yaqaano Amniyat.
Mas'uul katirsan maamulka gobolka, ayaa Warsidaha Garowe Online u xaqiijiyay in labada Sarkaal lagu qabtay deegaanka Awdheegle, kadib howlgal Ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa DANAB ay halkaasi ka fuliyeen maanta.
Dhanka Al Shabaab wali kama aysan hadlin warka ku saabsan qabashada Saraakiishan, oo kamid ahaa xubnaha ugu muhiim ee Kooxda, maadaama ay u qaabilsanaayeen Maaliyadda iyo Sirdoonka.
Waxaa shalay Ciidamada Xoogga dalka, gaar ahaan Guutada 60-aad isku soo dhiibay Caddow Maclin Isxaaq, oo Al Shabaab u qaabilsanaa sameynta qaraxyada iyo xirada miinooyinka, oo ka howlgali jiray gobollada Koonfurta Soomaaliya.
Horjoogan ayaa sheegay in uu isaga soo baxay Kooxda, kadib markii ay taabatey xanuunka dhacdadii 14-kii October qaraxii ka dhacay Isgoyska Zoobe, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof oo shacab ahaa.
Soomaaliya: Duqeyn Cirka ah oo ka dhacday Shabeellaha hoose
Soomaliya 17.10.2017. 11:10
AWDHEGLE, Soomaaliya - Duqeyn dhanka cirka ah, ayaa xalay waxay ka dhacday gobolka Shabeellaha hoose, taasi oo lala eegtay Kolonyo gaadiid ah, oo ay la socdeen hogaamiyaal sare oo katirsan Al shabaab.
Ahmed Ibrahim, oo kamid Saraakiisha ciidamada gobolka, ayaa u ...
Soomaaliya: Diyaarad ku dhacday duleedka Awdheegle
Soomaliya 03.02.2018. 13:51
Nabadoon caan ahaa oo lagu dilay Afgooye iyo sababta dilkiisa oo la ogaadey
Soomaliya 31.01.2019. 00:40
Soomaaliya: Hogaamiye katirsan Al Shabaab oo Howlgal lagu dilay
Soomaliya 04.01.2018. 19:34
Soomaaliya: Qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Soomaliya 08.01.2018. 10:09
Kufsi kusoo kordhay Shabeellaha Hoose [Imisa la kufsaday bishan?]
Soomaliya 22.06.2018. 00:57
Weerar Askar lagu dilay oo ka dhacay nawaaxiga Muqdisho
Soomaliya 07.02.2018. 23:55